Beesha Caalamka Oo Bixisay Lacagta Doorashada dadban ee sanadka 2016 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Beesha Caalamka Oo Bixisay Lacagta Doorashada dadban ee sanadka 2016
War saxaafadeed ay soo saartay beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay taageerayaan doorashada ka dhaceysa Soomaaliya, iyagoo dalbaday in la hirgeliyo doorasho hufan oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay.
Qaramada Midoobey, Mareykanka, midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD, Ingiriiska, Sweden iyo Talyaaniga waxaa ay soo dhaweeyeen halka ay mareyso diyaar-garowga doorashada Soomaaliya ee 2016-ka, sidaa waxaa lagu sheegay war saxaafadeedka.
Beesha caalamka waxaa kaloo ay sheegeysaa in ay kala shaqeyn doonaan dhammaan kooxaha ay khuseyso doorashada sidii doorashada ugu dhici laheyd si ay ku jirto hufnaan iyo cadaalad.
Kooxaha daneeya Soomaaliya sida midowga yurub, Jarmalka, Talyaaniga, Norway, Sweden, Ingiriiska iyo Mareykanka waxaa ay bxiyeen 60% lacagta doorashada halka inta dhiman laga rabo in laga soo xareeyo diiwaangelinta murashaxiinta iyo hantida dowladda federaalka ah, si lacagtaas u noqoto lacagta doorashada ee sanadkan, waxaa sidaa lagu sheegay war saxaafadeedka,.
Beesha caalamka waxaa ay ku talineysaa in hadda wixii ka dambeeya aan lagu mashquulin lacag ee shirka madasha ee soo socda oo ka dhici doona Muqdisho xal laga gaaro dhammaan howlaha doorashada ka harsan.
Howsha waa mid bilaaban rabta, sidaa waxaa sheegay ergeyga UNka u qaabilsan Soomaaliya Micehael Keating, isagoo intaa raaciyay”Waa xilli muhiim u ah Soomaalida, dhammaan shuruucda waa in ay wada ogolaadaan madaxda madasha hoggaanka qaran oo hadafkana aan ka dhinac marin”
Previous: Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadley qaabka loo sugayo amniga doorashada 2016
Next: Laacibkii Realmadrid Moratta oo dhaawac soo gaaray iyo Jamaahiirta oo welwelsan